के सोच्दै होलान् अहिले प्रधानमन्त्री ओली ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
के सोच्दै होलान् अहिले प्रधानमन्त्री ओली ?
प्रकाशित मिति : २०७७, २१ जेष्ठ बुधबार २२:३४
विनाम शर्मा ।
कोराना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन भन्दै सरकारले लकडाउन जारी गरेको दुई हप्ता हुँदै थियो । त्यतिबेला कुरा उठ्यो महामारी नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठनको । खासगरी साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा उठाएका थिए । मिश्रले महामारीसँग जुध्न यस्तो संयन्त्र आवश्यक भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन गरी यसबारेमा कुरा गरे । त्यसपछि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले टेलिभिजन अन्तरवार्तामा संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने भन्दै कुरा उठाए र आफूले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग सरसल्लाह गर्ने बताएका थिए । त्यस्तै कांग्रेस सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग यसबारेमा कुरा गर्ने मिश्रलाई बताएा थिए । त्यसपछि सर्वदलीय संयन्त्रका बारेमा ठूलै बहस भइरहेको थियो । त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकारी संचारमाध्यमहरु रासस, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र दैनिकले सामूहिक अन्तरवार्ता दिए । सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले तीन प्रश्नमा दिएका जवाफ हेरौंः
प्रधानमन्त्रीले अन्तरवार्ताको अन्त्यमा भनेका थिए म अहिले पनि दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु । मलाई जश लिनुपर्ने वा मूल्याङ्कन होस् भन्ने भावना पनि छैन । बफादारिताका साथ देश र जनताका लागि काम गर्ने हो । अराजकतालाई लोकतन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति ठिक होइन । त्यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीलाई नोक्सान नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नोक्सान गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले १८ घण्टा के का लागि काम गरे त ?
देश कोरोना कहरले आक्रान्त भइरहेका बेला जनता घरमा थुनिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री पार्टीका नेतालाई समेत गुमराहमा राखेर अर्कै खेल खेल्न लागेका रहेछन् । उनले त्यसबीचमा दल विभाजन गर्ने र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता नभए पनि निर्णय गर्ने सक्ने भन्दै दुई वटा अध्यादेश ल्याए । खासमा प्रधानमन्त्री त्यसमा व्यस्त रहेछन् । प्रधानमन्त्रीले अकस्मात मन्त्रिपरिषद बैठक राखेर निर्णय गराई दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाए । राष्ट्रपति पनि के कम अध्यादेश पुग्ने वितिक्कै प्रमाणिकरण गर्दिहालिन् । कस्तो केमेष्ट्री मिलेको ? देउवा सरकारले पठाएको अध्यादेश महिनौं प्रमाणिकरण नगरी लड्काउने राष्ट्रपति यसमा भने कति हतारो प्रमाणीकरण गर्न । अनि समाजवादी पार्टी फुटाएर दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउन ओलीले खेल खेलेको थाहा पाएपछि राजपा र समाजवादी पार्टीले एकाएक एकता गरे ।
त्यसपछि ओलीको सपना चकनाचुर भयो । यतिसम्म गरेकी ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाउन पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्न पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र नेकपाका सांसदहरु महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठलाई धनुषा नै पठाए । उनलाई अपहरणशैलीमा ल्याएको थाहा भएपछि त्यो मुद्दा अहिले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुग्यो र मुल्तबीमा राखिएको छ । त्यसपछि पार्टीभित्र ओलीलाई लगाम लगाउन भन्दै विभिन्न बैठक भए । झण्डै झण्डै ओली सत्ताच्यूत भए । आगामी दिनमा गल्ती नगर्ने भनेपछि अहिले केही मथ्थर भएको छ तर उनले स्थायी कमिटी बैठक फेस गर्न सकेका छैनन् । तर यही बीचमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक हुँदै भारत सरकारले सडक उद्घाटन गरेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । नयाँ नक्सा जारी भएको छ । नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ । यस मुद्दामा विपक्षी दलले समेत पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो अर्कै पाटो भयो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली भने सच्चिने खालको देखिदैन ।प्रधानमन्त्रीले कामै गरेको भए परीक्षणको दायरा बढाउ भनिरहनु पथ्र्यो ? अनि लकडाउनको दुई महिनासम्म औषधि नभएर परीक्षण नगरी बस्नुपथ्यो त ?
अब लकडाउनका कुरा
यसअघि भाइरस निर्जीव रहेको र यो निर्जीव तत्वमा बोसीय, बोसोजस्तो जुन फ्याटीय तत्व हुने गरेको भन्दै स्वघोषित विज्ञ भएका प्रधानमन्त्रीले लकडाउनको ७२ औं दिनमा विज्ञहरुसँग पाँच घण्टा छलफल गरे । त्यसक्रममा ज्ञान नभएको कुरामा बढी नबोल्न विज्ञहरुले सुझाव दिएछन् । विज्ञले त्यसो भन्दा प्रधानन्त्रीले सुनिरहेका उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउन जेठ २१ गते सकिंदै गर्दा त्यसभन्दा चार दिन अघि नै जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन थपे । यो लकडाउन थप्नुको कारण कोरोनाका लागि नभई एमसीसी पार्टीमा छलफल नगरी संसदबाट पास गराउने प्रपञ्चका लागि हो भन्ने समाचार पनि आएका छन् ।
जम्मा पाँच किलो चामल त्यही पनि सबैले कहाँ पाए र राहत ? अनि ७२ दिन जनता कसरी बाँचे भन्ने नसोच्ने प्रधानमन्त्रीले समाजवादका कुरा गर्न सुहाउँछ ? प्रधानमन्त्रीको पो सबै चीज बालुवाटारमा आउँछ जनतालाई कसले दिने ? त्यसपछि देशभरका व्यवसायीले लकडाउन उल्लंघन गर्दै बिहीबारदेखि पसल खोल्ने र व्यवसाय संचालन गर्ने एकतर्फी निर्णय गरेका छन् । ४५ वर्षअघि भारतमा इन्दिरा गान्धीले लगाएको आपतकाल (संकटकाल) यतिकै हट्यो, सरकारले हटाएँ भन्न भ्याएन । यति मजाक उडाइयो कि, पत्रकारहरुले समाचार लेखे रे, संकटकालको स्वागतमा रातभर भ्यागुता कराइरहेका छन् । कुकुर भुकिरहेका छन् । यस्तैयस्तै मजाक भयो । शासन मात्र लादेर हुन्न, जनतालाई विकल्प दिन नसक्ने, हुनेखानेलाई लुटमा छुट दिइरहने हो भने जनता बेसारपानी खाएर दैनिकीमा हिँड्छन् अब । हो यस्तै भयो अहिले नेपालमा पनि ।
प्रधानमन्त्रीको दम्भले दुःख पाए जनताले
लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म गर्ने अनि व्यवसायीलाई जेठ २५ भित्र कर बुझाउ नत्र जरिवाना भन्दै सोमबार आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना जारी गर्यो । सर्वत्र विरोध भयो र कांग्रेसले त कर नतिरी भद्र अवज्ञा गर्न आह्वान गर्यो । त्यसपछि कर तिर्ने म्याद असार सात गतेसम्मका लागि थप भएको छ । लकडाउनको बीचमा एक पटक उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरी तीन दिन सवारी चल्न दिई सहरबाट गाउँ जान चाहनेलाई पठाउने निर्णय गर्यो तर त्यो निर्णय एक घण्टा भन्दा टिक्न सकेन । प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बैठकमै झपारे भन्ने समाचार सार्वजनिक भए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई लकडाउन खोल्नेबारेमा कसैलै प्रस्ताव लैजाने हिम्मत गर्दैनन् रे ।
अब चाहिं विज्ञको सुझाव कतिको मान्ने हुन् प्रधानमन्त्रीले त्यो भने आगामी दिने बताउला । तर दुःखको कुरा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल हटाएँ भन्न नपाउँदै उल्लंघन भएजस्तो सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्यौं नभन्दै सर्बत्र अवज्ञा भइसकेको छ । अब सरकारले खुकुलो पार्यौं भन्नुको अर्थ छैन । किनकी समयमा निर्णय नगर्दा सरकार चिप्लिएको छ । जनताको बलसँग कसैको केही लाग्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा गरेका निर्णय, बोलेका तुच्छ बचन चाहिं एक पटक पुनः आफैं पढ्ने, सुन्ने र हेर्ने कि ? समयमा निर्णय गर्न नसक्दा के हुँदो रहेछ ? तपाईंको दम्भले मुलुकको धेरै कुरा विग्रको छ ।